Nalaza ny Fampivadian’ny Iraniana An’i Iran sy i Etazonia Tamin’ny Alalan’ny #LoveBeyondFlags · Global Voices teny Malagasy
Nalaza ny Fampivadian'ny Iraniana An'i Iran sy i Etazonia Tamin'ny Alalan'ny #LoveBeyondFlags
Voadika ny 20 Febroary 2017 6:00 GMT
Lehilahy Iraniana manao T-shirt “I heart America” (Ampoko i Amerika) mandihy ao anatin'ny famoriam-bahoaka. Sary nozaraina tao amin'ny Twitter.
Mitombo ny fifanenjanana eo amin'i Iran sy Etazonia hatramin'ny nanasoniavan'ny filoha Donald Trump ny didim-panjakana mandràra ny fivezivezen'ireo firenena maro an'isa Miozolomana, anisan'izany i Iran
Mba hanoherana ny kabary tsara lahatra feno fankahalana eo amin'ny fitondram-panjakan'izy ireo sy hanehoana ny fankasitrahan'ny Iraniana amin'ireo Amerikana mpanao fihetsiketsehana izay nitsangana nanohitra ny fandraràna fivezivezena nosoniavin'i Trump, nataon'ny Iraniana malaza tao amin'ny Twitter ny #LoveBeyondFlags [Fitiavana Mihoatra ambadiky ny Faneva].
Miaraka amin'ireo olona avy amin'ny firenena hafa voaràra, sy ny olona manohitra ny fandraràna manerana an'i Amerika, nizara afisy, andian-teny, sy ny sarin’ ny firaisan-kina eo amin'ny firenena samihafa, indrindra eo amin'i Iran sy i Etazonia ny Iraniana.
Avelao i Trump sy ny Mullahs hifampitolona eny amin'ny kianja raha izay no tian'izy ireo.
Saingy isika no VAHOAKA.
Nanomboka Alarobia tolakandro ny fanentanana tao Iran sy Eoropa. Tamin'ny 7:30 hariva tao Tehran, lasa malaza tao amin'ny firenena ny tenirohy (na dia tsy voamarina aza izany satria tsy afaka manao fanadihadiana izay tenirohy malaza ao Iran ny Twitter noho ny sivana mahazo ny sehatra). Nanara-maso ny tenirohy ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho amiun'ny Zon'olombelona, ary nanamarika fa nandritra ny tontolo andro, tokony ho 32.000 ny isan'ny sioka, ary saika 70% amin'izy ireo no avy ao Iran
Tao anatin'ny herinandro nanokanana an'i Trump, voakorontana ireo seranam-piaramanidina sy ny ny fiainan'ireo Iraniana an-jatony (ao anatin'ireo firenena fito hafa) noho ny fandraràna fivezivezena ao Etazonia. Andro vitsy taty aoriana, nanambara ny fitondran'i Trump fa hametraka an'i Iran tamin'ny fomba ofisialy tao anatin'ny “anaovana filazana” izy ireo.
NAPETRAKA TANATY ANAOVANA FILAZANA tamin'ny fomba ofisialy i Iran noho ny fitifirana balafomanga. Tokony ho velom-pankasitrahana amin'ny fifanarahana mampivarahontsana nifanaovana tamin'i Etazonia!
Noho ny fifandrafesana tsy mitsaha-mitombo amin'ny governemanta Iraniana, sy ny fanavakavahana ny teratany Iraniana ao amin'ny sisintany, mailaka ny Mpitarika Faratampony ao Iran naneho hevitra momba izany ary namaly tamin'ny fampitandremany manokana ny fitondran'i Trump.
Mankasitraka an'i Trump izahay! Satria nanao ny asany tanteraka ho anay izy tamin'ny famoahany ny tena endrik'i Amerika
Mampiavaka ny tantaran'i Iran hatry ny ela hatramin'ny nanombohan'ny Revolisiona Islamika taona 1979 ny fifandrafesana teo amin'i Iran sy i Etazonia, saingy tato anatin'ny valo taona, nahitana fitoniana izany noho ny Fifanarahana Ara-nokleary, notarihan'i Fitondrana Obama tamin'ny ampahany betsaka.
Avy amin'ny kaonty media sosialy malaza teo amin'ny Iraniana, ao anatiny sy ivelan'ny firenena, antsoina hoe Mamlekate (midika hoe mankamin'ny firenena) ny hevitra niandohan'ny fanentanana. Tao amin'ny fantsona Telegram @mamlekate, saiky nahatratra 1 tapitrisa ny Iraniana namaky ny lahatsoratra mandrisika ny Iraniana mba tsy handoro ny sainam-pirenena Amerikana.
Ilay kaonty media sosialy malaza @mamlekate nandefa momba ny tsy maha-mety ny fandoroana ny sainam-pirenena Amerikana ao Iran. Nalaza ny lahatsoratra
Nangataka tamin'ny Iraniana ny kaonty mba tsy haneho fankahalana an'i Etazonia amin'ny fandoroana ny sainam-pirenena Amerikana:
Efa nokasaina fa hodorana amin'ny 22 Bahman (10 Febroary) ny sainan'ny firenena tsy mety mampiditra ny Iraniana, izay tsy manaja ny sainam-pirenentsika manokana ao Amerika. Aza manao izany. Fanafintohinana ho an'ny vahoaka ao amin'ny firenena ny fandoroana sainam-pirenena fa tsy ho an'ny governemanta.
Mampiavaka ny fijoroan'ny fitondrana Iraniana manoloana ny imperialisma Amerikana ny fandoroana sainam-pirenena Amerikana, sy ny hiaka hoe “matesa i Amerika”, fomba fanao efa nanomboka tamin'ny fakàna takalon'aina tamin'ny taona 1979 tao amin'ny ambasady Amerikana. Niteraka adihevitra teo amin'ireo Iraniana nihetsi-po tamin'ny fitsanganan'ny Amerikana marobe haneho firaisankina sy fanohanana ny Iraniana, sy ireo firenena hafa ny lahatsoratr'i Mamlekate. Niteraka faniriana teo amin'ny Iraniana marobe ilay fanentanana hanoherana ity tantaran'ny fifankahalana eo amin'ny governemantan'ny firenena roa tonta ity, izay matetika tsy mitaratra ny fihetseham-pon'ny vahoaka ao amin'izy ireo.